Izisombululo - iZhangzhou Lilliput Electronic Technology Co, Ltd.
Faka endaweni yespredishithi kunye nephepha kunye neLilliput yedatha yesiphelo sedatha (MDT) ukwenza umsebenzi wakho ubelula. Yenza ngokupheleleyo izithuthi zakho ngokunika abaphathi beenqanawa, abaqhubi, amagcisa, abaphathi bamacandelo, kunye nabanye ukufikelela kubasebenzi kwizixhobo kunye nolwazi abaludingayo. imisebenzi emininzi inokukhethwa, njenge-3G / 4G, i-CAN, i-Wi-Fi, iBluetooth, i-Camera, i-GPS, i-ACC, i-POE njlnjl. njengezolimo, ezemigodi kunye nezithuthi zeenjineli) iilori, iifolokhwe, iitreyila kunye nezinto ezigrumba ...
Indawo yokugcina idatha yedatha inokunceda isithuthi ukuba sifezekise uluhlu lwemisebenzi, enjengokuqeshiswa kwezithuthi kunye nokuxhaswa ngemali, ukugcinwa kwezithuthi, ukunikezelwa kwamaphepha-mvume kunye nokuthotyelwa, ukulawulwa kwempahla, ukulawulwa kwengozi kunye ne-subrogation, i-telematics yezithuthi (ukulandelela kunye nokuxilonga), ulawulo lomqhubi, isantya ulawulo, ukuphathwa kwamafutha, impilo kunye nolawulo lokhuseleko, kunye nokuthengiswa kwakhona kwezithuthi ....
Iilori kunye netreyila
I-Lilliput yonke ikwi-PC enye yolawulo lweshishini enomboniso oqaqambileyo kunye noburhabaxa, inokusebenza ngokuthembekileyo kwimeko zorhwebo nangaphandle, iiPC zekhompyuter zokuchukumisa isikrini ziyanyamezela ukungcangcazela, ukothuka, ukubonakaliswa kukufuma, uthuli, ubushushu obugqithisileyo kunye nokuhla kweqondo lobushushu. Isakhelo esivaliweyo okanye esivulekileyo, zinokwenziwa ngokwezifiso kakhulu, zomelele kwaye zithembeke.
Njengenxalenye yecandelo lokungenisa ngaphakathi kwinkqubo yolawulo lwamashishini kwiinkalo ezahlukeneyo, umz. Inkqubo yolawulo lwamashishini akrelekrele, imveliso yamandla ombane, ukuvelisa, unyango lwezonyango, i-HMI, itheminali yezibuko, njl.njl. Iphaneli yePC enezinto ezininzi (i-HDMI, VGA, USB, RS232, RS422, RS485, LAN, GPIO), inkqubo ye-OS eyahlukileyo (i-Android , Linux, WinCE, Windows), imisebenzi emininzi (3G / 4G, CAN, WiFi, Bluetooth, Camera, GPS, ACC, POE) kwaye ufake indlela eyahlukileyo yesicelo.
With the development of science and technology, more technology products have appeared around us, which has continuously improved our living standards. Same as many technological products, Lilliput all in one panel pc zizisa amava afanelekileyo kunye nolonwabo kubomi bethu.
Ukuze ubonise ulwazi ngokungacacanga ngakumbi nangokufanelekileyo, iLilliput inokubonelela / isiko iimveliso zePC ezilungiselelwe imarike, zisenza ukuba imisebenzi isetyenziswe kubungakanani obukhulu, kunye nokusebenza kakuhle. Kule mihla, zininzi iindawo ekukho kuzo zonke ikhompyuter enye, ezinje ngeNkqubo yokuKhathalela iSibhedlele ekude, i-Self-service Order Machine, ishishini kunye neMfundo, okusingqongileyo namandla, Indawo yokuhlala kunye neKhaya eliSebenzayo, umatshini wokuThengisa iMultimedia njl.
I-Lilliput ikhompyuter yentengiso yenza ukuba inkqubo enzima ibelula. Kukho iinkqubo ezahlukeneyo ze-OS (i-Android, iLinux, iWinCE, iiWindows), ujongano olucebileyo (HDMI, VGA, USB, RS232, RS422, RS485, LAN, GPIO), imisebenzi emininzi (3G / 4G, CAN, WiFi, Bluetooth, Camera, GPS, ACC, POE) kwaye ufake indlela eyahlukileyo yesicelo. Izisa uninzi loncedo kwicandelo lesicelo elahlukileyo.
Ishishini kunye neMfundo
Ubume bendalo namandla
Indawo yokuhlala kunye neKhaya eliSmart
Umatshini wokuThengisa iMultimedia
Meeting 10.1" ANDROID PANEL PC, industrial 10.1" ANDROID PANEL PC, I-PC yangaphakathi yeShishini, Mobile Data Terminal , Lilliput Mobile Data Terminal , IPhaneli yoShishino iPc,